दुबई र रुझान जानकारी रत्न र आभूषण उद्योग
दुबई को जेम्स र आभूषण इंडस्ट्रीज
बजेट-मैत्री दुबई को लागि एक पर्यटक गाइड
सधैं संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात मा रहन - के यो को लागी लायक छ?
दुबई को जेम्स र आभूषण इंडस्ट्रीज - दुबई सिटी कम्पनी संग गाइड
दुबईको रत्न र गहना उद्योग। ठीक छ, दुबई मध्य पूर्वको एक सुन्दर र विश्वव्यापी शहर हो। यो यात्रु र कार्गो को लागी वैश्विक यातायात हब मा एक महत्वपूर्ण स्थान हो। तेल प्रमुख राजस्व हो र यसले शहरको विकासलाई गति दिन मद्दत गर्दछ। जुन पहिले नै एक प्रमुख व्यापारिक हब थियो, तर दुबईको रत्न र गहना उद्योग पनि राजस्व मा एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो।
समग्र गहना व्यवसायले प्रभाव सिर्जना गरेको छ वर्षको अस्थिर सुनको मूल्य र ग्राहकहरु बाट ठूलो मांग बाट। गहनामा 5% VAT को परिचय लागतको अतिरिक्त बोझ थप्यो। तर, अझै, मान्छे दुबई प्रेम आभूषण र गेस्टस्टोनहरू।
को पोशाक गहना दुबई एक बलियो क्षेत्र साक्षी छ यसको मूल्य पोइन्ट कम भएकोले राम्रो गहनाको तुलनामा। मुख्य बहुमूल्य र अर्ध-बहुमूल्य रत्नहरूले दुबईको रत्न र गहना उद्योगहरूमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। फिरोजा इस्लाममा एक पवित्र पत्थर मानिन्छ र यसलाई सुन्दर सुन्दरता देखाउँदछ भने पङ्क्ति र हारमा अध्ययन गरिन्छ।
फिरोजा ध्यान मा एकाग्रता ल्याउन पनि प्रयोग गरिन्छ। रूबी रत्न इस्लाममा पनि धेरै विशेष महत्त्व राख्छ। सामूहिक पोशाक गहना भित्र, मुख्य ब्रांडहरू जुन आयो एल्डो एक्सेसरीजहरू हुन्। उदाहरणका लागि, मान, साथै, Zara सँगै H&M का साथ। ठिक छ, यी प्रस्तावहरू र मिश्रित पोशाक, सामान्यतया बोलेको सुनमा बनेका गहनाहरू लामो समयसम्म चल्छन्। र उनीहरूले पोशाक गहनाका लागि विकासमा नकरात्मक प्रभाव पनि कम योगदान गरे। दुबई वास्तवमै एक ग्रेट स्थान हो.
बिक्री को लागी आभूषण को आभूषण को प्रचार
घटनाहरू जस्तै संगठित छन् दुबई ग्रीष्म आश्चर्यहरु विशेष अफरहरु प्रदान गर्न को लागी। यसबाहेक, कि सौदाहरू जागरूकता बढाउन सहयोग गर्नुहोस् र बिक्री बढावा। धेरै उपभोक्ताहरु को गहना र रत्नहरु को लागी ठूलो प्रेम छ र ती घटनाहरु को लागी किन्न को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
असल आभूषणमा बलियो स्थानीय नेताहरूको योगदान
कडा स्थानीय नेताहरूको योगदानले प्रमुख भूमिका खेल्छ। दामा ज्वेलरीका अग्रणी खेलाडी हुन् जुन जोयलूकस होल्डि ,्स, मालाबार ग्रुप र रिचेमन्ट (दुबई) पछि छन्। दमास धेरै राम्रो गुण बोक्छ यो यो यसको गुणवत्ता र यसको लागि एक मजबूत प्रतिष्ठा हो Emirati विरासत, सेलिब्रेटी र सिफारिशहरूको साथ एक अन्तर्राष्ट्रिय अपीलको अतिरिक्त।
दुबई र गोल्ड
दुबईको खुद्रा गहना क्षेत्र एक समग्र छ दुबईमा बस्ने 180 नागरिकता। यसको गहनाहरू सबै 30 देशहरूबाट आयात गरिन्छ यसैले माग पूरा गर्दछ दुबई भ्रमण गर्ने विश्व पर्यटकहरू। दुबईका सुनका गहनाहरू 18K, 21K, 22K मा 24K सम्म बेचिन्छन् विश्वको हरेक क्षेत्रको आवश्यकताहरू पूरा गर्न।
दुबई बजार स्वाद र प्राथमिकता अनुसार गहना को एक विस्तृत श्रृंखला छ। Sprawling मल को घर दुबईसँग संसारका केही उत्कृष्ट गहनाहरू छन्। युएई बजार 14K र 22K मा बनेको गहना को सही चयन प्रदान गर्दछ।
सुन र आभूषण प्रवृति
उपभोक्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा युएई बजारका लागि एशियाई हुन्, मुख्य रूपमा किनमेल गर्नेहरू भारतीय उपमहाद्वीपबाट। भारतीयहरू र धेरै भारतीय समुदायहरूको लागि सुन किन्ने शुभ अवसरहरू हुन्, दिवाली एक महत्त्वपूर्ण चाड हो। परम्परागत सुन गहना र हीरा गहना यस अवधिमा धेरै उच्च मांग मा छन्।
हीरा किन्न दुबईमा
हीरा कुनै पनि शुभ अवसरको लागि सबैभन्दा धेरै माग गरिएको रत्न मानिन्छ। उपभोक्ताहरू हीरा र रत्नको प्राविधिक पक्षहरू बारे सचेत छन् र तिनीहरूले लगानीका साथै हिराको सजावटी मूल्यको लागि खरीद गर्दछन्। दुबई केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूमा सबै सुविधाहरू छन् हीरा र रत्नहरूमा कुनै त्रुटि पहिचान गर्नका लागि। Herkimer हीरा पनि हीरा को एक किस्म हो जुन सुन्दर गहना र पेंडन्ट बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ग्लोबल ग्यास उद्योगको सदस्य दुबईमा एक बैठक आयोजित गर्न रोलर कोस्टर मार्केट ग्राफ को बीच अस्थायी वस्तु प्रक्रिया मा तत्काल चिन्ताहरु लाई सम्बोधन गर्न। अन्तर्राष्ट्रिय रंगीन रत्न एसोसिएशन (आईसीए) र दुबई मल्टी-कमेडिटी सेन्टर (डीएमसीसी) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी दुबईमा एक राम्रो वस्तु बजार स्थापना गर्ने उद्योगको विशेष पूर्वाधार र सुविधा विकास गर्न प्रयास गरिएको छ।
तर दुबईले डीएमसीले कल्पना गरेको सम्भाव्यता स्थापित गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ धेरै अवरोधहरू पार गर्न सकिन्छ। पहिले, रत्न उद्योगले कौशल अनुकरण, विकल्प र संवर्द्धनको कारण ठूला चुनौतीहरू खडा गर्दछ। ग्रेडिंग र मूल्य निर्धारण पनि गाह्रो छ र यसको लागि पर्याप्त उद्योग अनुभव आवश्यक पर्दछ। दुबई पनि भन्सार मुद्दाहरूको सामना गर्दछन् अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग व्यापार गर्नको लागि जटिल प्रयासहरू।
यदि तपाईं विभिन्न प्रकारका गेस्टस्टोन चाहनुहुन्छ भने यहाँ जानुहोस्.
दुबई शहर कम्पनी दुबईमा राम्रो रोजगारी गाईडहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसोभए यो कुरामा तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा आफ्नै भाषाको साथमा गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।